प्रशंसापत्र - OUZHAN व्यापार (शंघाई) कं, लिमिटेड
ओझहानले विश्वव्यापी व्यापार सुरु गरेदेखि हामीले धेरै ग्राहकहरूको पक्षमा जितेका छौं।
म आउजुहान सेवाबाट सन्तुष्ट छु। ग्राहक सेवा छिटो छ र गेबीले मेरो अंशहरूको लागि अविश्वसनीय काम गरे। म फेरि ओझहानसँग काम गर्न चाहन्छु!
द्रुत मोड र गुणवत्ता उत्पादन को कल्पना गर्न बनेको। म त्यो भन्दा बढि माग्दिन। ओउहान एक राम्रो पार्टनर हो!
पार्ट्स थ्रीडी मोडेलहरू प्रयोग गरेर बनाइएको थियो। अर्डरको छलफलको क्रममा, ईन्जिनियरहरू अत्यन्त ध्यान दिएका थिए र मेरो गलतफलकहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछु ताकि म तिनीहरूलाई सुधार गर्न सक्दछु। उच्च गुण बनाइएको। ढुवानी ट्र्याक गरिएको थियो। प्रत्येक भाग पूर्ण रूपमा प्याक गरिएको थियो, एक बहु-तह फोम फिल्ममा अन्यबाट अलग। म आपूर्तिकर्तासँग खुसी छु। प्रबन्धक चण्डलर सम्पर्कमा थिए, उही दिन प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै। म हाम्रो सहयोग जारी राख्न आशा गर्दछु।
थियरी बचत गर्नुहोस्
यो CNC शप चट्टानहरु! यो सेवासँग धेरै खुसी छु र अब मेरो साथी छ कि मेरो अर्डरको साथ मद्दत गर्दछ यसले सबै चीज सजिलो बनाउँदछ। मँ अब अधिक अर्डर राख्दै छु, द्रुत सेवा र धेरै मैत्री। रियोका लागि सोध्नुहोस् ऊ काम गर्नमा उत्तम छ!
सम्पूर्ण प्रक्रिया भर उत्कृष्ट सेवा। ईमेल र वाट्सएप मार्फत द्रुत संचारले हाम्रा सबै आवश्यकताहरू र विवरणहरू र छलफल गरेको नमूनाहरूको बारेमा छलफल गर्दछ जुन हाम्रो उच्च रेखाचित्रको चित्रणमा ठ्याक्कै मिल्दछ। हामी ओजुहानसँग भविष्यमा काम गर्ने कुराको आशा गर्दछौं जुन हामी विश्वास गर्छौं हाम्रो पोर्टफोलियोमा धेरै उत्पादनहरूमा दीर्घकालीन सम्बन्ध हुनेछ।